Kupatsanurwa kweCeramic Zvigadzirwa - YiXing International Logistics (GuangDong) CO., LTD
Ceramic Zvigadzirwa kuburikidza neUnited States FBA kutumira
Ms. Xu anobva kuChaozhou, Guangdong Province. Iye ndiye e-commerce mashandiro maneja wekambani yezvigadzirwa zveceramic iyo inotengesa zvedongo makapu, mabhodhoro nehunyanzvi hwekutengesa kunze kwenyika muUnited States. Ms xu nguva pfupi yadarika yakurudzira kuAmazon imba yekuchengetera kutumira imwe vhoti zvinhu zvakatumirwa kuUnited States, saka "iyo amazon yekufambisa suo nesuo" pakutsvaga kwaBaidu kutsvaga YiXing Global logistics, Ms Xu ona kambani yedu yakanangana neicho chakakosha kutumira vatakuri venyika dzekutakura zvinhu, zvakare muwebhusaiti iri pamusoro kuti vatarise zviitiko zvakawanda zvine chekuita nekugadziriswa, ndokundibata kuti nditaure, mushure mezviri nyore kunzwisisa uye ndokusiya ruzivo rwekuonana naye kumutengesi.
Munguva pfupi, Peggy, maneja weLiXing Global logistics, akafonera Mai Xu kuti vazive huwandu hwehuwandu hwezvinhu zvakakosha uye dhizaini chaiyo yechirongwa chekufambisa. Kubudikidza nekutaurirana, ndakadzidza kuti Mai Xu vakashanda pamwe nevazhinji vaitungamira kumberi. Nekuda kwezvakasiyana zvinhu, zvakaita semutengo wenguva, kukanganiswa kwechigadzirwa ndiro dambudziko rakajairika, saka Mai Xu vane zvakawanda zvekunetsekana nezvedambudziko iri, uye divi reYXL rekushandisa rakati raizoita kutakura zvinhu zvine musoro , uye pane icho chigadzirwa kurongedza chinokurudzirwa zvakare kuti utarise zvakanyanya kune, edza kudzivirira izvi kukuvara. Amai Xu vakatiwo pane zvikamu gumi nezvishanu zvezvinhu zvinotumirwa kudura reAmazon muUnited States panguva ino, izvo zvinofanirwa kubviswa kaviri negungwa.
Ndakagadzirawo chitaurwa maererano nehuwandu hwezvinhu zvaMiss Xu, uye zvakare ndakazivisa kuti nguva yekutumira kuimba yake yakasarudzwa yekuAmazon muUnited States ingangoita mazuva makumi maviri nemana. Mme Xu vakambopfuura nemidziyo, uye vari kunyatsojeka nezve aya mitengo yenguva. Mushure mekuverenga, akagamuchirawo zviri nyore chirongwa ichi chekufambisa. Mushure mekunge Mai Xu vape ruzivo rwakakodzera, ini ndakabva ndaronga kuti mutyairi atore zvinhu, ndokuyeuchidza mutyairi kuti atarise kuchengetedzeka kwezvinhu. Mushure mekunge zvinhu zvaendeswa pakati nepakati kuimba yedu yekuchengetera, izvo zvinhu zvinogona kubviswa panongosvika zuva rekutumira. Gare gare, YiXing Global logistics yakapihwawo ruzivo rwakakodzera panguva iyoyo kuna Mai Xu, kuitira kuti vatengi vakwanise kunyatso nzwisisa mamiriro ezvinhu ekufambisa nhumbi uye kutevedzera munguva zvisinei nekuti paive nematambudziko api. Ichi zvakare chakakosha chinhu cheYXL Logistics yekugutsa vese vatengi.
Mutengo wekutakura weUS weYiXing Global logistics yagara yakakwikwidza, nekuti isu tinotarisa kune yekufambisa yeUS uye tine makore anopfuura gumi ekuziva ruzivo muSino-US yakakosha nzira yekufambisa. Saka zvisinei uine hombe FCL, LCL, zvakawanda zvekutakura zvinhu zvinodiwa, isu tinogona maererano nezvaunoda kuitira kuchengetedzeka uye nekufambisa kwakanaka, rega uve nechokwadi!
Kana uchida, pls taura nesu pabhizimusi mutsetse: +86 17322126273 (Peggy Zhang)